Björklund: Waa la gaaray xilligii Naato lagu biiri lahaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jan Björklund hogaamiyaha xisbiga Liberaalka. sawir: Janerik Henriksson/TT
Björklund: Waa la gaaray xilligii Naato lagu biiri lahaa
La daabacay fredag 2 september 2016 kl 11.26
Hogaamiyaha xisbiga Liberalerna (L) Jan Björklund ayaa soo dhoweeyay natiijada baaritaan la xiriira ururka gaashaan-buurta Naato, ama sida baaritaanka lagu magacaabey ”siyaasadda ammaanka difaaca Sweden iyo wada shaqeeynta, sida ku cad qoraal ay middaa ka qortay hayadda wararka Sweden ee TT oo wax ka akhrisay baaritaanka.
Sida uu qabo baaraha dawladdu u xilsaartay howshan oo la soo ban-dhigi doono bishan septeembar oo eyn ku ku jirno in haddii uu dalkani xubin ka noqdo ururka gaashaan-buurta Naato horseedi doonto hub urursi hor leh iyo sidoo kale ay yareeyn lahaa iska hor-imaad ka dhaca nawaaxiga balliga wayn ee Östersjön.
– Waxay ila tahay in natiijada baaruhu tahay mid sax ah. Ammaanka dalka Sweden ayaa kor u kici lahaa haddii uu dalkani xubin ka noqdo ururka gaashaan-buurta Naato, qaasatan kolka laga eego tallaabooyinkii uu sannadahan dambe ku tallaabsanayay dalka Ruushku. Markaa waa in uu dalkani u diyaargaroobaa siduu xubin buuxda uga noqon lahaa ururka, sida uu sheegay hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna Jan Björklund.
Laakiin wuxuu baaruhu leeyahay in aanay jirin cabsi laga qabo inuu ruushku ku soo duulo Sweden oo keliya?
– Ha, Sweden oo keliya cabsi lagama qabo, waana fikir aan la qeeybsanayo. Hase yeeshee waxaa jirta xaalad in haddii uu dalka Ruushku doono inuu ama handado ama ku duulo waddammada baaltika (Estooniya, Latfiya iyo Lituweeniya), oo iyadana aan laga cabsi qabin waddammo jaar la ah ayuu dagaalku saameeynayaa.
Wuxuu haddaba baaruhu farta ku fiiqayaa in dhammaan waddammada dhaca balliga wayn ee Östersjö ey muhiimad yeelaneyaan. Sidaa daraadeed haddii waddammada taakuleeyn loo fidineyo waa in loo mariyo nawaaxiga iyo hawad warta wayn ee Östersjön. Sweden ayaana ah joqoraafi ahaan xoogga ugu wayn ee nawaaxiga, sidaa ayuuna dagaalku nagu soo gaari lahaa. Waana mid loo baahan yahay in laga sii gaashaanto, sida uu sheegay Jan Björklund.
Hase yeeshee uu fikir ka duwan midka baaraha qabo af-hayeenka difaaca ee xisbiga Vänsterpartiet Stig Henriksson: Iyo in aan marnaba looga cabsi qabin in dalka Ruushku weerar ku soo qaado Sweden.
– Midda uu baaruhu caddeeyay waxay tahay in aanay jirin cabsi laga qabo in Ruushku uu duulaan ku yahay Sweden. Waana goorta keliya ee ururka Gaashaan-buurta Naato uu isticmaali karo qodobka shanaad ee xeerkiisa iyo inuu Sweden caawiyo. Halka dhanka kale ay sii kordhi lahayd xaaladda ah in Sweden ay faraha la gasho iska-hor-imaadyo waaweyn, mar haddii xubin laga noqdo ururka gaashaan-buurta Naato, mana fahmi karo sida ay tallaabadaasi u noqon lahayd mid nabadda u wanaag-san, sida uu sheegay.